कसरी छोटो अवधि भित्र PR9 डाउफिक ब्याकलिङ्कहरू प्राप्त गर्ने?
तपाईंको व्यापारलाई Google मा दृश्यात्मक बनाउनको लागी, तपाइँलाई पहिलो वा कम्तिमा दोस्रो खोज परिणाम पृष्ठमा स्थान निर्धारण गर्न आवश्यक छ. तपाईंको साइटलाई Google SERP को शीर्षमा धक्का राख्न निकै गाह्रो छ किनकी सबै बजार निचाइहरूमा प्रतिस्पर्धा उच्च छ. दुई महत्त्वपूर्ण पक्षहरू जुन तपाईंको अनलाइन व्यापारको समृद्ध बनाउन खोज इन्जिन अनुकूलन र प्रासंगिक विज्ञापन हुन्. जबकि प्रति प्रति क्लिक विज्ञापन केहि व्यवसायहरु को लागि धेरै महंगा हुन सक्छ, खोज इन्जिन अनुकूलन को कम से कम खर्च संग गरे जा सकता है. तथापि, यो उल्लेख गर्न योग्य छ कि तपाइँ सबै अनुकूलन पहलुहरु र विचारहरू साथै विजेता अनुकूलन अभियान सिर्जना गर्नको लागि हानिकारक र चालहरू जान्न आवश्यक छ।. सौभाग्य देखि, त्यहाँ यो एक जस्तै धेरै एसईओ ब्लगहरू, विशेष रूपमा तपाईंको सामाजिक उपस्थिति बलियो बनाउन डिजाइन गरिएको छ.
यो लेख PR9 dofollow backlinks को निर्माण को विषय मा समर्पित छ. तपाईले सिक्नु हुनेछ कि तपाईको व्यवसायमा कसरी बहुमूल्य ब्याकलिङ्कहरू र तपाईको साइटमा सबैभन्दा सान्दर्भिक र गुणस्तरको लिङ्कहरू लिङ्क निर्माण गर्न तपाई कुन प्रयोगात्मक वेब स्रोत र सामाजिक प्लेटफार्महरू प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ।.
तपाई PR9 वेब स्रोतहरुमा Dofollow ब्याकलिङ्कहरू किन निर्माण गर्नु आवश्यक छ?
फेसबुक, ट्विटर र लिंक गरिएको इनको लोकप्रिय सामाजिक सञ्जालसँग तपाईको एसईओ चेकलिस्टको लागि ठूलो पेजरैंक छ।. यी प्लेटफर्महरू उत्तम स्थानहरू छन् जुन तपाईंको साइटको उल्लेख हुनुपर्छ. PR9 वेब स्रोतहरूबाट तपाईंको ब्लगमा ब्याकलिंकहरू सिर्जना गर्न सक्नुहुनेछ शायद गुगलमा तपाईंको साइटको स्तर निर्धारण स्थितिलाई सकारात्मक असर पार्नेछ. यसैले यो एक स्मार्ट विचार हो कि आफ्नो फाईल को लागी तपाईंको ब्लग मा फिर्ता दिए को लागी आफ्नो उच्च रैंक को उपयोग को लागि. यदि सबै कुरा सही भएमा, तपाईले खोज इन्जिन र उच्च श्रेणीबाट अधिक प्राधिकरण प्राप्त गर्नुहुनेछ.
त्यहाँ उच्च पीआर वेबसाइटहरूबाट प्राप्त गर्न सकिने ब्याकलिङ्कहरूको दुई प्रकारका प्रकारहरू छन् - dofollow र nofollow. ड्याफ गर्नुहोस् ब्याकलिङ्कहरू तपाईंको साइटहरूमा स्वामित्व मान्दछन् किनकि तिनीहरूले लिङ्क रसलाई हस्तान्तरण गर्छन्. खोज इञ्जिनले संकेतहरूलाई ध्यान दिन्छन् जुन प्राधिकृत स्रोतहरूलाई ब्याकलिङ्कमार्फत आउँछ र तपाईंको साइट उच्च श्रेणीमा दिईन्छ. "Nofollow" ट्यागको साथ खोजी खोजी खोजी बटहरू द्वारा हेर्न सकिँदैन र तपाईंको साइट रेटिङ बढाउनको लागि शून्य मान ल्याउन सकिँदैन. HTML मा, dofollow लिङ्कहरूको लागि पूर्वनिर्धारित कोड हो. यो वेबसाइट URL मा केहि विशेष जोड्न आवश्यक छ. यसको विपरीत, कुनैपनि पछाडि ब्याकलिंकहरू विशेष आदेशको आवश्यकता देखाउँदछ जुन लिंकको दायरामा गणना गरिएको छैन.
PR9 लाई फिर्ता पछाडि लिंक कसरी प्राप्त गर्ने?
उच्च पीआर ब्याकलिंकहरू सिर्जना गर्ने सबै भन्दा राम्ररी तरिका टिप्पणीहरू वा प्रोफाईल पेज सिर्जना गर्न हो. तर सबै भन्दा पहिले, तपाईं एक अनुसन्धान गर्न र आला सम्बन्धित वेब स्रोतहरु को रैंकिंग तथ्याङ्कहरु लाई हेर्नु पर्दछ र कुन प्रकारको ट्राफिक तिनीहरूले तपाईंको साइटमा ल्याउनेछन्।.
आउनुहोस् हामीलाई सबैभन्दा लोकप्रिय उच्च पीआर सोशल सञ्जालहरूमा एक नजर राख्नुहोस् जुन तपाईंको साइटमा गुणक लिङ्ग रस ल्याउनेछ।.
तपाई फेसबुकमा आफ्नो ब्यापार पृष्ठ सिर्जना गर्न आवश्यक छ, त्यसपछि "स्टेटिक एचटीएमएल पेजमा लिंक" मा जानुहोस् र यहाँ तपाईंको आधिकारिक वेबसाइट यूआरएल छोड्नुहोस्।. त्यसपछि तपाइँ "सम्पादन" बटन खोज्न र फाइल, सूचकांक हटाउन आवश्यक छ. html. यस खण्डमा तपाईंले निम्न ढाँचामा आफ्नो वेब स्रोत लिङ्क थप्न आवश्यक छ: तपाईंको ब्लग नाम . फेसबुकमा dofollow ब्याकलिंक सिर्जना गर्ने प्रक्रिया समाप्त गर्न, तपाईंलाई "बचत गर्नुहोस् र प्रकाशित" बटन क्लिक गर्न आवश्यक छ.
LinkedIn मा dofollow ब्याकलिङ्कहरू सिर्जना गर्न लगभग फेसबुकमा. तपाईंले आफ्नो व्यापार खाता सिर्जना गर्न आवश्यक छ र खण्डमा "व्यक्तिगत जानकारी" मा तपाईंको स्थायी dofollow ब्याकलिङ्क समावेश गर्दछ. अन्य लिङ्कहरू जुन तपाईं यो प्लेटफर्ममा निर्माण गर्न सक्नुहुनेछ यो नोभेम्बर हुनेछ Source .